I-Rowan Cottage- I-Modern 2 Bed Cottage enobhavu oshisayo! - I-Airbnb
I-Rowan Cottage- I-Modern 2 Bed Cottage enobhavu oshisayo!
Walwyn's Castle, Wales, i-United Kingdom
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Jessica
U-Jessica Ungumbungazi ovelele
I-Rowan Cottage ingelinye lama-Holiday Cottages ethu angu-4* oziphekelayo anobhavu wawo oshisayo, isanda kulungiswa futhi yakhiwe endaweni enhle yekhaya lomndeni wethu.
Isekelwe emaphandleni amahle ePembrokeshire edolobhaneni laseWalwyns Castle elicishe libe yimizuzu eyi-10 ukuya eDolobheni laseHaverfordwest kanye nebanga elilinganayo ukuya eMilford Haven. Amanye amabhishi ethu amahle asendaweni nawo aseduze njengokuhamba ngemizuzu eyi-10. Ngaso sonke isikhathi ujabulela ukuthula nokuthula kwezwe lasePembrokeshire!
I-Rowan Cottage isilungiswe yaba sezingeni eliphezulu ekuqaleni kuka-2021. Inekhishi elinobukhulu obuhle obuvulekile, idina kanye negumbi lokuhlala. Igumbi lokugezela elihle elineshawa kanye nebhavu, kanye namakamelo okulala amabili anosayizi omuhle. I-Rowan inendawo yayo enkulu engemuva/yengadi enobhavu oshisayo wangasese.
Kanye neCottage sineLaundry, indawo yokudlala ngaphandle, inkundla yethenisi egcwele, indawo yokuzivocavoca kanye negumbi lemidlalo elinetafula le-pool, itafula lethenisi, itafula le-foosball nendawo encane yokudlala ethambile yabancane. Silungisa zonke izisetshenziswa zenkundla yethenisi negumbi lemidlalo, elihlanzwa kahle ngaphambi nangemuva kwakho konke ukubhuka.
Sibekwe emaphandleni asePembrokeshire. Sitholakala endaweni emaphakathi futhi sikwazi ukufinyelela amadolobhana ethu amabili, iMilford Haven neHaverfordwest phakathi nemizuzu eyi-10 yokushayela kanye namanye amabhishi ethu amahle ngesikhathi esifanayo.
Uma ujabulela ukuhamba sinomzila wezwe omuhle osizungezile kanye nedamu elihle lokuhamba ngezinyawo imizuzu engu-15 nje ukusuka kithi.
UJessica Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Walwyn's Castle namaphethelo